Lafta-gareen oo ka huleelay dhexdhexaadinta Farmajo iyo Rooble kuna laabtay Baydhabo.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa Maanta dib ugu laabtay Magaalada Baydhabo ee Xarunta ku-meel gaarka u ah Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Madaxweyne Lafta-gareen ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhoweyey labada-golle Dowlada ,Maamulka Gobolka Baay,kan Degmada Baydhabo, Cutubyo ka tirsan Ciidanka ilaalada Madaxtooyada iyo qeybaha kala duwan Bulshada Magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa kamid ahaa mas’uuliyiintii dhex-dhexaadinta ka dhex waday Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, kuwaas oo aan wax natiijo ah kasoo bixin.
Socdaalka Lafta-gareen ayaa abuuray walaaca shacabka Soomaaliyeed ka qabaan inuu sii jiitamo khilaafka labada mas’uul ee ugu sarreeya dalka oo galaafanaya qabashada doorashadii dadbanayd ee ay ku heshiiyeen dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya.